eXamaYo - Mividianana ny Kavina Micro, Camera ary Watch for Cheats on Test - eXamYo.com
Atombohy ny fanoratana mba hahitana ireo vokatra tadiavinao.
Earpieces miaraka amin'ny Camera
Teknolojia Farany ho an'ny Fitsapana
Earpieces, Cameras, Earpieces Miaraka amin'ny fakan-tsary sy Famoronana Fakana an-tsary
MANOKANA ANY AN-TSARA AN-TANY
Ny Fakantsary Bokotra
Micro Earpieces Miaraka Amin'ny Fakantsary
MIALA ANY EXAMYO, AOKA INDRINDRA! ;)
Ny karazana fitsapana rehetra
Tsy azo atao ny tratra
"Raha reraka ny mitoraka vola amin'ny fakantsary tsy mendrika kalitao sy bokotra tsy manara-penitra ianao dia manolotra kitapo eXamYo, 5 lesona miaraka aminy ary toy ny andro voalohany"
"Nila maika haingana ny pinganillo aho satria nanao fanadinana ny ampitson'iny ary noho ny tolotra tsy ampoizina sy ny hafainganam-pandehan'ny eXamYo.com tonga tao anatin'ny 24 ora latsaka kely fotsiny aho"
"Nihevitra aho fa tsy handeha amin'ny fanadinana famoronana teorika ... mandra-pahitako ny vokatra eXamYo ary tsy maintsy nandalo ny voalohany aho tsy nisy nahomby"
"Nanao asa siansa aho ary tsy miasa ho ahy ny pinganillos na chops, fa hitako ny famantaranandro eXamYo Watch ary izany fotsiny no ilaiko"
Ahoana raha mila izany IZAO?
Manana fitaterana sy serivisy haingana indrindra izahay vao mahazo ny baikonao ara-potoana.
Azonao atao ve ny hisambotra ahy?
Tsia, tsy hita na re avy any ivelany ny vokarintsika.
1. Ampidiro ao amin'ny vatanao ny fitaovana manaraka ny boky fampiasa amin'ny mpampiasa.
2. Makà valiny mivantana avy amin'ny fahitanao elektronika.
3. Adikao amin'ny fanadinana, ankatoavy ary adino ny mianatra =)
Afaka mahazo azy ivelan'ny tranoko ve aho?
Eny, afaka maka ny fonosanao avy amin'ny biraon'ny orinasa fandefasana ianao.
24 TRANO TONTOLO FAMPISORANA FAMPISORANA
Raha hitanao fa mora kokoa izany, averinay ny fahasamihafana
Izahay dia Manaiky: